देश Archives - Jhapa Times
Post date ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार २२:०६
No Comments on सितापुरी – किष्ने सडक कालोपत्रे गर्न कमलबासीको माग
केर्खा। साबिक लखनपुर र तोपगाछीको सिमानामा पर्ने कमल गा.पा. वार्ड नं. ४,५ र ६ को संगममा पर्ने सितापुरी – किष्ने सडक कलोपत्रे गर्न स्थानियले माग गरेका छन् ।
सोमवार स्थानियबासी र जनप्रतिनिधि बिच शान्तिपुर चौकमा भएको भेलामा स्थानियले सो माग गरेका हुन् । स्थानियबासी, जनप्रतिनिधि र टोलबिकास संस्थाका पधाधिकारीहरु बिच भएको भेलामा छेउ छाउका सबै सडक कालोपत्रे भइसके पनि सितापुरी किष्ने सडक हाल सम्म कालोपत्रे नभएको स्थानियबासि उमनाथ अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो ।
भेलमा बोल्दै कमल गा.पा. उपाध्याक्ष बेणु शिवाकोटी ले सो सडक कालोपत्रेकालागी एडिवी को योजनामा पारिसकेकोले केहि ढिलो भएपनि सडक कालोपत्रेको काम चाडै सुरुहुने आश्वासन दिनुभयो ।
भेलामा ठुला योजना अन्तरगत पर्ने काबेली जलबिधुत आयोजनाबाट ल्याईने हाइटेन्सन विद्युतको खम्बा सोहि सडकमा लगाउने कुरामा स्थानियबासीहरुको चर्को बिरोध चलिआएको बिषयलाइ लिएर सरकारले नै सडक कालोपत्रे नगरेको हो कि भन्ने स्थानियले आशंका ब्याक्त गरेका थिए । स्थानियको आशंका निवारण गर्दै गा.पा. अध्यक्ष मेनुका काफ्ले कालोपत्रे बनाउनेसँग हाईटेन्सन बिद्युत प्रसारण लाईनको सम्बन्ध नभएको बताउनुभयो । उहाँले सडक कालोपत्रेकालागी डिपिआर भै सकेको र काम चाडै सुरुहुनेमा विश्वस्त रहन स्थानियहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
भेलामा स्थानियहरुले सडक कालोपत्रेको काम चाडै अगाडि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
Post date १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार १४:११
No Comments on प्रहरीले मदिरा पसलबाट भोड्का चोरेको भिडियो भाईरल: नेपाल प्रहरीका सईसहित तीन प्रहरी निलम्बित
सिरहा । मदिरा चोरीको आरोपमा नेपाल प्रहरीका सईसहित तीन जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा कार्यरत प्रहरी सई नबलकिशोर ठाकुर तथा प्रहरी जवान अन्नुकुमार राय र नरेशकुमार राय निलम्बनमा परेका हुन् । गत जेठ ९ गते राति १० बजेतिर लहान नगरपालिका २३ गढीया चोकमा रहेको पूजा मदिरा होटलमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा पसलका सञ्चालक भागेका थिए ।
सञ्चालक भागेपछि पसलबाट ती प्रहरीहरूले केही थान रक्सी लिएर गएका थिए । उनीहरुले भोड्का रक्सी लिई गएको भिडियो विभिन्न सामाजिक संजाल तथा संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएपछि उनीहरुलाई प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम निलम्बन गरी थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।